11th April 2021, 02:03 pm | २९ चैत्र २०७७
सेनाको तबेलामा ३ दशक बिताएका प्रमुख सुबेदार राजु खत्रीले गत मंसिरमा अवकाश पाए। वर्षौपछि सधैंका लागि घर फर्कँदै थिए उनी। रिटायर्ड जिन्दगी, सधैंका लागि त्याग्दै थिए चुस्ता, बाँकी समय दिँदै थिए घरपरिवारलाई - मनमा छाउनु पर्ने थियो खुशी। तर, मन भइदियो बेचैन। किनकि उनी अझै ठूलो परिवार छाडेर निस्किँदै थिए नेपाल क्याभ्लरीबाट।
नेपाल घोडचढी सेनाको त्यो परिवारमा विभिन्न पद र तप्काका सैनिकहरू थिए। सँगै थिए, विभिन्न रङ र उमेरका घोडा। ती घोडा जो उनका सबैभन्दा नजिक थिए। तबेलाको फोहोर, दुर्गन्ध र रिसाहा घोडाको लात बिर्साइदिने निकटता थियो उनीहरूसँग।
सैन्य अनुशासनमा बाँधिएका राजु कहाँ चल्न सक्थे र नियम विपरीत। नियमले क्याभ्लरीबाट निस्किन भन्यो, निस्किए। घर फिरे।
फुर्सदिलो समयमा बानी पार्न थाले। लगाम सम्हालेको हातले कुटो, कोदालोमा बानी पार्दै थियो, नजिकियो घोडेजात्रा। अनि सुरु भयो उस्तै छट्पटाहट - कस्तो भइरहेको होला घोडेजात्राको तयारी? कुन घोडालाई कुन खेलमा राखिएला? बिरामी घोटालाई त कुदाउँदैनन् होला नि?
उनको जिज्ञासाको पोको खुल्यो चैत २७ गते। टुँडिखेलमा घोडेजात्राको अन्तिम तयारी भइरहेको थियो। शो हेर्न उपस्थित थिए, प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा। प्रधानसेनापति लगायतसँगै दर्शकदीर्घामा बसेर रमाइरहेका थिए राजु खत्री पनि।
'पहिलोपटक मञ्चमा नभइ दर्शकदीर्घामा बसेर खेल हेर्दै थिएँ। तर, हातमा नभए पनि मनमा लगाम लागेको थियो। आफू घोडामाथि नै बसेको छुजस्तो लाग्दो रहेछ,' उनले दर्शक बन्नुको अनुभव सुनाए, 'कुन घोडाको रफ्तार कम भयो। कुनले राम्रो प्रस्तुति दियो कुनले नराम्रो सहजै पत्तो पाउँदो रहेछु।'
तर, त्यसो भएन। सचित शमशेरले त पाँच सय साट्ठी जनाबाट ४० जनालाई मात्र जागिरका लागि योग्य ठहर गरिदिए। हातमा थाल र गिलाससँगै खुसी बोकेर आएकाहरू अधिकांश भारी मन लिएर फर्किए।
‘भाग्यले चालिस जनामा पारेको थिएँ। भाग्यले नै खच्चड गुल्ममा पुर्‍यायो। खुसीखुसी जिम्मेवारी स्वीकारेँ,’ राजुले सुनाए।
'नेपाल क्याभ्लरी'का घोडाहरूसँग ३० वर्ष सहकार्य गरे राजुले। सिपाहीबाट प्रमुख सुबेदार बने। बिचमा सरुवा हुने अवसर पनि नपाएका होइनन्। तर, यो ठाउँ छाड्न चाहेनन्। किनकि उनका लागि परिवार बन्यो तबेलाका घोडाहरू।
घोडासँगको सम्बन्धले नै उनलाई नजिक बनायो अरु जनावरसँग। उनलाई जनावर कहिल्यै फोहोर लाग्दैनन्।
घोडाहरूसँग यसरी जोडिए कि, कुनै एउटा घोडा बिरामी पर्दा उनलाई निद्रा पर्दैनथ्यो। कहाँ दुख्यो, के भयो? पीडा बोलेर व्यक्त गर्न सक्दैनन् भन्ने यथार्थले झन् पोल्थ्यो उनलाई।
यसरी उनले तबेलामा बिताए आधा जिन्दगी। सेना हुनुको धर्म निभाए। २०६१ सालमा सेनाको तालिमकै क्रममा माओवादीको एम्बुसमापरी बायाँ आँखा गुमाए। तर, न जागिर छाडे न त जिम्मेवारी नै।
'जबजब एउटा आँखा नदेख्दा बाटो बिराउँछु कि भन्ने सोचें तबतब घोडाले डोहोर्‍यायो मलाई,' उनी घोडासँगको लगाव अभिव्यक गर्छन्।
सैन्य जिन्दगी सकिँदासकिँदै भने केही खट्कियो। समयसँग गुनासो रह्यो राजुको। अवकाश पाउनु अघिको वर्ष अर्थात् पोहोर साल घोडेजात्राको सबै तयारी पानीमा मिसिए सरह भयो। घोडेजात्राको कार्यक्रम स्थगित भयो - पहिलो पटक। नत्र कडाभन्दा कडा कर्फ्यु लाग्दा पनि टुँडिखेलभित्र कुदिरहेका हुन्थे घोडा। बजिरहेको हुन्थ्यो ताली।
घोडचढी सेनाका लागि निकै महत्वपूर्ण र खुशीको दिन हो घोडेजात्रा। यही दिनका लागि उनीहरू महिनौंदेखि तयारी गर्छन्। आ- आफ्नो विशेष घोडाको सरसफाइ र श्रृङ्गार पटार पनि।
पोहोर त राजु चार वटा घोडाले तान्ने बग्गीमा सवार हुँदै थिए। बग्गीको पछाडि कृष्णकै भेषभुषामा प्रस्तुत हुने तयारी थियो उनको। महाभारतको युद्ध शुरु हुनुअघि द्विविधामा रहेका अर्जुनलाई साथ दिन पुगेका कृष्ण!
तर, कोरोना महामारीका कारण तयारी खेर गयो। कार्यक्रम स्थगनको सूचना आएपछि जम्मा दुई वटा घोडा टुँडिखेलमा लगेर कुदाइयो, सैन्य परम्परालाई निरन्तरता दिनमात्र। त्यसरी तुहियो राजुका लागि घोडचढी सेनाका रुपमा अन्तिम घोडेजात्रा भव्य बनाउने योजना।
यस वर्ष चाहिँ घोडेजात्राका दिन आफूले घरमै पालेका टर्कीहरूलाई आहार हालेर बिताउँदै छन् उनी। मनभने घरी तबलामा श्रृङ्गारिँदै गरेका घोडाहरूसम्म पुगेर फुरुङ्ग हुन्छ। घरी टुँडिखेलमा कुदिरहेका घोडा सम्झेर।
'निकै याद आउँदो रहेछ। अस्ति तयारी त हेरेको हुँ तर विशेष दिनमा त्यहाँ हुन नपाउनुको थक्थकी छ मनमा,' उनले भने,'अरु खेलको त घोडाहरूलाई बानी छ। बास्केटबलजस्तै हर्सबल भन्ने नयाँ खेल थपिएको छ। त्यो चाहिँ कस्तो खेल्लान्?'
क्याभ्लरी छाडेपनि उनको मन घोडाहरूमै छ। राजुलाई घोडाहरूको चिन्ता छ र जिज्ञासाका पोको पनि। त्यसैले त आज बिहानै नयाँ प्रमुख सुबेदार गोविन्दबहादुर खड्कालाई फोन गरे। घोडेजात्राको तयारीबारे सोधे। र भने,'कुनै घोडालाई चोट नलागोस् र मान्छेलाई पनि। बेस्ट अफ लक।'